Samsung Galaxy Note 8: ကင်မရာနှစ်လုံးပါရှိပြီးလက်ဗွေစကင်နာပါ ၀ င်သည် Androidsis
Galaxy Note7၏ပြproblemsနာများကြောင့် Note series ၏အမြဲတမ်းဖျက်သိမ်းမှုကိုညွှန်ပြနိုင်သည့်အချိန်များတွင်ကောလဟာလများပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ Samsung အတည်ပြုခဲ့သည် ဒီနှစ်စျေးကွက်ဝင်တိုက်လိမ့်မယ် Galaxy Note 8 လို့ခေါ်တဲ့မော်ဒယ်သစ်.
ဤကြေငြာချက်၏ရလဒ်အနေနှင့်ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များစတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်၊ ယခုနှစ်တတိယသုံးလပတ်။ အလားတူစွာဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသတ်မှတ်ချက်အချို့ကိုလည်းပေါက်ကြားခဲ့ပြီး terminal အသစ်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည့် terminal ကိုပြသည့်ပုံပင် Galaxy S8 နှင့် S8 Plus.
ယခုဒီဇိုင်နာတစ် ဦး သည် Galaxy Note 8 ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကို rendering ပြုလုပ်ရန်အတွက်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရိုး Galaxy S8 + ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်များစွာသောအရာများကိုမဖော်ပြပေ။ တံတား။ တစ်ခုတည်းသောကြီးမားသောခြားနားချက်မှာကင်မရာနှစ်လုံးပါ ၀ င်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Samsung ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များမရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
Note 8 တွင် dual-camera ရှိနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာမကြာသေးမီက Galaxy S8 + ၏ dual-camera ကင်မရာနှင့်အတူဤရှေ့ပြေးပုံစံကိုယိုစိမ့်မှုကြောင့် Samsung ကဤလုပ်ဆောင်မှုကိုသီးသန့်ထားရန်ဖျက်သိမ်းလိုက်သောပုံသဏ္peာန်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်။
လက်ရှိမသိသေးသည့်အချက်မှာ Samsung သည်မည်သည့်ကင်မရာနှစ်မျိုးသုံးနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီသည် Apple ကဲ့သို့တူညီသော optical zoom, 3D ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ် wide-angle sensor ကိုပင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။
ဒီ Galaxy Note 8 ရဲ့အယူအဆမှာလည်း နောက်ဘက်တွင်လက်ဗွေစကင်နာမရှိခြင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ Samsung သည် Sony ထုတ်ကုန်များမှလှုံ့ဆော်မှုကိုခံယူပြီး၎င်းကိုနေရာချနိုင်သည် တ ဦး တည်းအခြမ်းသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်မျက်နှာပြင်အောက်မှာလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ.
ဒါဟာပြီးသားဤအချိန်တွင်လူသိများသည် Samsung နှင့် Synaptics အလုပ်လုပ်နေသည် တစ် ဦး In-display ကိုလက်ဗွေစကင်နာအကောင်အထည်ဖော်၌တည်၏။ တကယ်တော့ Samsung ကဒီဟာကို Galaxy S8 အတွက်လုပ်ချင်တာဖြစ်ပေမယ့်ထုတ်လုပ်သူနှစ် ဦး စလုံးကအချိန်ကုန်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ Note 8 မှာနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဖြစ်လာနိုင်တယ်။
သတိပြုရမည့်အချက်မှာ Galaxy Note 8 တွင်တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်မရှိသေးသော်လည်း၎င်းကိုဖြန့်ချိရန်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှအသေးစိတ်များနှင့်ဓာတ်ပုံများပေါ်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Samsung Galaxy Note 8: ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်လက်ဗွေစကင်နာပါဝင်သည့်သဘောတရား
ငါနောက်ကျောစာဖတ်သူမရှိခြင်းသေချာပေါက်ကမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသွားဆိုလိုသည်ကြောင်းပေါ့ပေါ့ယူမယူကြဘူး။ ဖြစ်နိုင်ခြေများပိုရှိပါသည်။ အကယ်၍ သူတို့ဟာ Iris Scanner ကောင်းကောင်းတစ်ခုတီထွင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ဗွေဖတ်ခြင်းမပြုဘဲလုပ်နိုင်သည်။ မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသည့်နည်းပညာသည်မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသူများအတွက်မျက်လုံးများတပ်ဆင်ထားသူများအတွက်မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုတိုးတက်စေသည်။
အမေဇုံသည်ကလေးများမ ၀ င်သော ၀ ယ်ယူမှုများအတွက်ငွေပြန်အမ်းမည်